လိုတရနှလုံးသား | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်သွားစားရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ်။
သူအလုပ်လုပ်တဲ့ အခန်းမှာ ဘုရားစင်လေးတစ်စင်ရှိတယ်တဲ့။ ဘုရားခန်းလေးလိုမျိုး အခန်းလေးထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရတာတဲ့။ ဘုရားကို အမြဲဖူမျှော်ခွင့်ရနေတော့ နေ့တိုင်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်တဲ့။ ဒေါသဖြစ်စရာ၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ တစ်ခုခုကြုံလာရင်တောင် ဘုရားကို မြင်နေရတော့ ဒေါသမထွက်ဖြစ်ပဲ စိတ်ကြည်လင်မှုကို ရစေတယ်တဲ့။
အော် ကောင်းလိုက်တာနော်လို့ စဉ်းစားတွေးမိတယ်။ ဒေါသကင်းစင်တဲ့ စိတ်ကြည်လင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ဘုရားရဲ့  ကိုယ်ပွား ရုပ်ထုတော်ကို မြင်တာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တောင် ကိုယ့်ရဲ့  ဒေါသစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာ။ အလွန်ကိုပဲ ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။
ဘုရားရဲ့  ရုပ်ပွားတော်ကို မြင်တာနဲ့တောင် အဲဒီလောက် အကျိုးရှိရင် ဘုရားရဲ့  ဂုဏ်တော်တွေကို လိုရင်း အဓိပ္ပါယ်တွေပါ သိပြီး ပွားများရင်တော့ ဘုရားကို ပိုကြည်ညိုပြီး ဓာတ်ကောင်းတွေလည်း ပိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ တန်ခိုးသတ္တိလည်း ပိုထက်မြက်ပါတယ်လို့ အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ လိုတရနှလုံးသား စာအုပ်မှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာဂုဏ်တော်ကိုးပါးရှိပါတယ်။ ဒီဘုရားဂုဏ်တော်တွေကတော့
ကိလေသာ ကင်းစင်သော မြတ်စွာဘုရား
ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို ပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား
ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား
သိစရာအားလုံးတို့ကို အမှန်အတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
အသိဉာဏ်ရော၊ အကျင့်ပါ ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
လောကသုံးပါးကို သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
ဆုံးမထိုက်သော သတ္တ၀ါတို့ကို အတုမရှိ ဆုံးမတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရား
နတ်လူတို့၏ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တိုင်လည်း သိတော်မူ၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း သိအောင်ဟောတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
ဘုန်တော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
လို့ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက စာအုပ်မှာ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အချို့ အချို့  သော မကောင်းမြင်ဝါဒီသမားများရဲ့  ရုပ်ထုကိုးကွယ်မှုတို့ဆိုတဲ့ စကားတွေကို အာရုံမထားပဲ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့  ဂုဏ်တော်တွေကို ပွားများပြီး ဘုရားရဲ့  ရုပ်ပွားတော်ကို ကြည်ညိုမှုနဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို နှလုံးသွင်းနိုင်ရင် မြင့်မြတ် ကောင်းမွန်တဲ့ နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ ရုပ်ထုကို ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ပဲ ရုပ်ထုအတွင်းကို မြတ်စွာဘုရားရဲ့  ဂုဏ်တော်တွေကို သွင်းပြီး ပူဇော်နိုင်ကြမှာပါ။
ဘုရားဖူးတယ်၊ ဘုရားကို ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း မြတ်စွာဘုရားရဲ့  ဂုဏ်တော်တွေကို သိရှိပွားများပြီး ဖူးမျှော်၊ ပူဇော်ရင် ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
ဥပမာ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ အိမ်မှာလည်း ဘုရားစင်တွေ ရှိနေရဲ့ သားနဲ့ ဘာကြောင့်များ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ခဏခဏသွားပြီး ဖူးမျှော်သင့်တာပါလဲ။ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကတည်းက မြတ်စွာဘုရားရဲ့  ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကို ဌာပနာပြီး တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့  ဂုဏ်တော်တွေကို ပွားများပြီး တရားအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် မွန်မြတ်ကောင်းမွန် သန့်စင်တဲ့ ဓာတ်တွေက ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ ကောင်းမြတ်တဲ့ ဓာတ်တွေရှိတဲ့ နေရာမှာ မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ကို ပွားများရင် ပိုပြီး တော့ အကျိုးကျေးဇူးများပြားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက်ဖူးမျှော်နေကြတာပါ။
ဓာတ်သဘောတရားတွေဟာ ကူးစက်တတ်တဲ့ သဘောတရားရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေကူးစက်လာတာက ကောင်းပေမယ့် မကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေကူစက်လာရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေ ရှိတဲ့ နေရာမှာ ကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေကူးစက်တတ်သလို မကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေ ရှိတဲ့ နေရာကနေလည်း မကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ကာကွယ်ကြပါမလဲ။
အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့  ကြာလိုလူ စာအုပ်ကို သတိရမိပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်နောက်ကျောမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်။
ရွှံ့ နွံကြားမှာ ပေါက်ဖွားပေမယ့်
ရွှံ့ နွံနဲ့မလိမ်းကျံ၊ မကပ်ငြိတဲ့ကြာကို
လောကဓံရွှံ့ နွံတွေ၊ ကာမဂုဏ်ရွှံ့ နွံတွေ
အဲဒီရွှံ့ နွံတွေနဲ့ မလိမ်းကျံ
ဆရာတော်ပြောသလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်က တကယ့်ကိုပဲ လောကဓံ၊ ကာမဂုဏ်၊ ကိလေသာရွှံ့ နွံတွေနဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ ဓာတ်တွေပေါများကြွယ်ဝလွန်းလှပါတယ်။ ဒီလို လောကကြီးထဲမှာ အဲဒီ ရွှံ့ နွံတွေ လိမ်းကျံ ပေစွန်းမှု မရှိအောင် ကြာလိုကျင့်ကြံရပါမယ်။
သာမာန်လောကီနယ်ပယ် အနေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ဒီလောကကြီးထဲက မကောင်းတဲ့ဓာတ်သဘောတွေကို ရှောင်တိမ်းဖို့ ကြိုးစားကြရပါမယ်။ ဒီလိုကြိုးစားရမယ် ဆိုတာကလည်း အထူးတလည် လုပ်နေစရာ မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အထက်က ပြောခဲ့သလို မြတ်စွာဘုရားရဲ့  ဂုဏ်တော်ကို ပွားများပြီး မိမိနှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားတည်ထားပြီး ကောင်းမြတ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုကို သာ တည်ဆောက်နိုင်ရင် ကောင်းကျိုးချမ်းသာအားလုံးဟာ မလိုချင်အဆုံးရရှိလာနိုင်ပြီး ကြာလိုလူတစ်ယောက်အကဖြစ်နဲ့ မကောင်းမှုရွှံ့ နွံတွေ မကပ်ငြိနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted on Monday, October 12th, 2009 at 1:55 pm	and posted in ဘာသာရေး.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
« တက်လှမ်းနေသော အခြေများ